Archive du 12/03/2012
Nafanafana ny fanehoan-kevitra nandritra ny hetsika nataon�ireo mpandala ny ara-dal�na sy mpomba ny filoha Marc Ravalomanana tao amin�ny kianjan�i Magro Avaratsena Antsirabe ny sabotsy 10 martsa teo.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Hamindra fahefana amin'ny miaramila ?
Manomboka mivoaka indray ny siosion-dresaka amin'izao fotoana fa mety hamindra fahefana amin'ny miaramila i Andry Nirina Rajoelina any ho any amin'ny volana mey any.
Fahavalo izay misakana ny fodian-dRavalo
Saro-piaro amin�ny fampiharana ny tondrozotra, indrindra ny andininy faha-16, 17, ary faha-20 ny FOKOTIM, na ireo mpikambana ao amin�ny Tiako i Madagasikara eny anivon�ny Fokontany, indrindra ny eto Antananarivo Renivohitra.
Tonga omaly ireo teknisianin�ny SADC
Vita hatreo ny fandanian�andro sy ny fandrirarirana amin�ny fandinihana ity resaka famotsoran-keloka ity, fa dia tsy maintsy hirosoana izy io manomboka izao.
Hafahafa fomba fiasa
Efa tsapa hatrany am-boalohany fa hafahafa be ihany ny fomba fiasa ao anatin'ny governemanta Beriziky noho ny fisian'ny fifanandrinana ara-poto-kevitra eo amin'ny samy minisitra.
Fifamelan-keloka no ilaina
Nanantotosa fihaonambem-paritra tao Antsirabe ny sabotsy 10 martsa lasa teo ny fianakaviamben�ny Grad Iloafo tao amin�ny Faritra Vakinakaratra, notarihin�ny CT Rasolofondramananjatovo Berto, mpandrindram-paritra ao Vakinankaratra notronin�ny filoha nasionalin�ity fikambanana ity dia ny Pr Randriamarolaza Louis.
Hatahorana ny hetsi-bahoaka
Tapa-bolana aty aorian�ireo niparitahan�ny etona �dioxide de soufre� avy ao Ambatovy Tanandava ka nahasempotra olona 53, dia mandeha ny resaka ao Toamasina izao fa nisy ny maty vokatr�io.
�Resaka rafitra no mampikorontan-dava antsika eto�
Efa tonga saina avokoa ny olona rehetra ankehitriny amin�ny tsy mahatafavoaka antsika amin�ity olana mianjady eto amin�ny firenena ity, hoy i Henri Lecacheur filohan�ny antoko PFM, fa ny resaka rafitra no tena olana.
Hetsika Masoandro Maraina
�Potehin�ny mpanambola ny firenena�
Fahombiazana ! Izay no azo amintinana ny fanombohan'ny fitetezam-paritra nataon'ny hetsika Masoandro Maraina, tarihan'ny Maitre Avoko Rakotoarijaona, ny faran�ny herinandro teo.
Tapaka ny tady eo amin�ny PDS sy ny mpiasa
Mand� ny hiara-miasa amin�ny PDS Sileny Alban ireo mpiasa mitokona miisa 62, ao amin�ny Kaominina Manakara.
Tsy midongy hitovy lenta amin�ny lehilahy ny vehivavy MFM
Toa lasa mirona amin�ny fikaramana an�ady ny vehivavy manao politika amin�izao fotoana izao, hoy Rtoa Rasoaniaina Malalatiana mpandrindra ny fikambanana Vehivavy Mfm eto amin�ny Faritr�Analamanga.
Misy �virus� te hampisaraka ny mpitolona
Hafa noho ny fanaony ny hetsiky ny Rodoben�i Toamasina ny sabotsy 10 martsa teo. Raha vaovao mikasika ny raharaham-pirenena no nandrasan�ny mpitolona, dia tsy izay no reny fa fifanasana vangy.
Arahabaina aloha ry Jean fa tsy mba anisan�ny voatora-bato isika tamin�ilay andro zoma nalaza iny � !
Hianiana ireo mpikambana voatendry
Hotanterahina anio tolakandro, mandritra ny lanonam-pitsarana hatao ao amin�ny Fitsarana tampony Anosy ny fianianan�ireo mpikambana voatendry handrafitra ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana mandritra ny tetezamita na ny CENIT.
Jeneraly nanampatra fahefana
Nanampatra fahefana ity Jeneraly iray, lehiben�ny mpitandro filaminana, nandritra ny fandalovany tao Antsirabe ny sabotsy 10 martsa lasa teo.
Ho hita eo indray !
Asa indray izay hambaran'ny SADC tarihan'i Marius Fransman, izay hitoetra andro vitsivitsy eto amintsika.